Football amụma ịkụ nzọ amụma - Olee otú Iji Nwee - GridiNew - comparatif-audio.net
Football amụma ịkụ nzọ amụma – Olee otú Iji Nwee – GridiNew
Jiri akwukwo ihe omumu nke intaneti di. Ga-ahụ ebe nrụọrụ weebụ na ọrụ dị iche iche dị ebe ahụ ka enyere iji mee ka ndị egwuregwu ụlọ akwụkwọ sekọndrị dị elu.
Mana, ọbụlagodi na ị nwere ike ịme nke ahụ karị, ọtụtụ na-eme mkpesa na ha enweghị mmalite mgbawa ahụ. Nke a bụ ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịmalite ma ọ dị mkpa ịmekwu Deadlifts na Box Squats.
Kyle Orton: 22/34 maka elekere 296 na 4 TD na 0 INT. Orton ahọrọla ịgbachi nkịtị n’ọnwa gara aga na-esochi mmalite dị mma na-atọ ọchị ruo oge nke afọ mana ọ laghachitere n’izu nke kpakpando bọọlụ fantasy n’izu. Orton kwesịrị ịnọgide na-adị naanị na asọmpi niile n’ihi na ịdabere kpamkpam na ngafe na Denver co.
Agbanyeghị, ndị ọkachamara na-agba ume abụghị ihe ị ga – eme na ndụmọdụ ịkụ nzọ bọọlụ na – akwụghị ụgwọ. Ọ ga-ewe naanị ndụmọdụ site n’aka onye nyocha egwuregwu n’ezie ka ọ daba na ịgba chaa chaa na-aga nke ọma. Ọ na – enyere ọtụtụ aka ma ọ bụrụ na ikpebie ihe mbụ ma ọ bụrụ na aro dị ka ndị a bụ ezigbo ma ọ bụ sitere na isi mmalite ziri ezi tupu ịme nzọ ọ bụla.
Nanị banye n’ahịrị ma malite ịwụli elu. Chee echiche banyere ya dị ka ụdọ nke jumps ogologo jikọtara ala. Mgbe mbụ ịmalitere, debe oghere ahụ na 20-yds. Mgbe ahụ, n’ihi na ịmalitewanye ogo, ị nwere ike ime ka ọdịiche ahụ dịkwuo 30-yds.
Football bụ egwuregwu na-ebido n’ike. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgbanye ya ngwa ngwa, ọsọ fọdụrụ na ọsọ gị na-efu. Tụkwasa m obi. Mụ onwe m gabigara nke a na mmalite ọrụ m. Mgbe m doziri ya, egwuregwu m gbanwere naanị.
Echiche m bụ otu izu mbụ nke oge uto na-abụ ọtụtụ n’ime anyị anaghị enweta foto a pụrụ ịdabere na ya na ụdị gafee ngalaba njikọ, ọ ga-ewe izu ole na ole ka ụkpụrụ a pụta. Expertsfọdụ ndị ọkachamara nwere ike ịlele usoro dị ogologo oge wee tụọ aro na ụfọdụ ndị egwuregwu bụ ndị ọkachasị mmeri n’ụlọ, ụfọdụ nwere ọmarịcha ndekọ (ma ọ bụ ogbenye) pụọ. Nke nwere ike ịba uru nyocha ikpeazụ, mana anaghị m atụ ụjọ nwere ike ịdị na mgbe ị na-achọ bọl bọọlụ na-abịa. Yabụ, lee anya azụ ka anyị kwesịrị ile anya? N’ezie ọ bụghị n’ime oge ikpeazụ – Arụ m ọrụ na-erughị ọkara ọnwa iri na abụọ egwuregwu akụkọ (naanị egwuregwu egwuregwu).
Ọ dị mma, atagbuola m gị ogologo oge na ihe kpatara ị ga – eji mee plyos.hope n’oge ae kwuru n’elu okwu 1500, ị maara ihe kpatara plyometrics nwere ike iji nye gị ohere ịdị ngwa na ọtụtụ ihe mgbawa. Ma, gịnị na-eme ugbu a? Imirikiti ndị mmadụ na-amalite ịwụ elu, na-agba ọsọ dị elu n’elu ụlọ ha ma merụọ onwe ha ahụ ngwa ngwa.